သြဒုက္ခ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » သြဒုက္ခ
Posted by unclegyi1974 on Dec 15, 2011 in Arts & Humanities, Ideas & Plans, Myanmar Gazette, Society & Lifestyle | 24 comments
နောက်နဲနဲကြီးလာတော့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုမှီလိုက်တဲ့လူကြီးတွေပြောတာကိုမှတ်သားဖူးပါတယ် ဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတော့ လူစားဖို့သတ္တ၀ါကိုမသတ်ခင်သယ်ယူရင်
ကျနော် သိထားတဲ့ “ဒေါသ” ထွက်ရင် ပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့ လူ့သွေးလှဲ့ပါတ်မှုနဲ့ ကိုက်ညှိပြီး
လုံးဝ လက်ခံပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် သွေးထဲမှာအဆိပ်အတောက်ဖြစ်မှုနဲ့ လူကိုရောဂါရစေသေးရင်
အခုလို အကောင်တွေရဲ့ သွေးအဆိပ်သင့်ပြီးရောဂါရစေတယ်ဆိုတာ 100% ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာပေါ့။
ဒီကြက်တွေဟာ စိတ်ညစ်နေတဲ့ ကြက်တွေလို့
လမ်းကြောမမြင်ရလောက်အောင် မှုန်နေ(ဒါမှမဟုတ်) မရှိသလောက်ရယ်..။
ဘယ်အကြောနဲ့.ဘယ်လိုမောင်းနေမှန်းမသိတဲ့.. ဘတ်စ်ရယ်..။ ဆိုင်ကယ်ရယ်..။
သတ္တ၀ါတွေကို.. မသတ်ခင်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တာ မပြုရတာဟာ..ယဉ်ကျေးတဲ့..လူတွေရဲ့… ယဉ်ကျေးမှုပါ..။
ဒါကိုမြင်တဲ့.. ကလေးငယ်တွေမှာ.. စိတ်ကြမ်းတွေ..ကူးစက်နိုင်လို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်…။
အောက်မှာ..နိုင်ငံကြီးတချို့… ဥပဒေတချို့ရဲ့.. လင်ခ်ပေးထားတယ်..။
တရားတစ်ပုဒ်မှာ လူ့ဘ၀ဆိုတာ ကုသိုလ်ကံ အကျိုးပေးကြောင့် ရောက်ရတယ်။
မတော်လို့များ အကုသိုလ်ကံက အကျိုးပေးလို့ တိရိစ္ဆာန်ဘ၀ကိုရောက်သွားရင်
လူတွေက မညှာမတာ ပြုမူတာတွေကို
ပြန်ပြောလို့လည်းမရ၊ တွန်းလှန်ခြင်းလည်း မပြုနိုင်ပဲ
အဆပေါင်းများစွာ နာကျင်ခံစားရမယ် တဲ့လေ။
အဲဒါကြောင့် ကုသိုလ်ကောင်းမှု (ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ) ကို စိတ်ပါလည်းပြု စိတ်မပါလည်းပြုပါတဲ့။
ဒါတွေမြင်ရင် ဂီ့ဖောက်တွေ စိတ်စိတ်လာတယ်နော ….
အသတ်စားခံ ရမှာချင်း အတူတူ .. ဘီယာတိုက် မာဆတ်ဂျိ ပေးပီး…
အသားမွေးလာခဲ့တဲ့ ကိုဘေးနွား နဲ့များ ..အကျိုးပေးပုံချင်းကွာထှာ …
အော် ….. တလိတ်ဆံ ဖစ်ရတာတောင်….ပြောပါဒယ်….
ဒါပေသိ …တရုတ်ပြည်သွားပီး ကြက်ဖြစ်ရင် သားပေါက်ဘ၀ကတည်းက
အရှင်လတ်လတ် မိကျောင်းကျွေးခံရတာထက်တော့ သာသေးကြောင်း
သဂျီး ရေ ဗျိတိသျှ လဲဂျစ်စလေးရှင်း ကောင်ဆယ်လ်က အာတီကယ်လ်တွေတော့
ဆွဲမထုတ်ပြပါနဲ့ဂျာ … ရင်ဘတ်ထဲက အောင့် အောင့်လာလို့ပါ……
ကျုပ်မလဲ ခုတလော မမာဘူးဂျာ တိုက်၂လေးရယ်မှ ဆိုင်၂….ခုတလော ရွာထဲမလဲ
ကီးမြင့်တာတွေချည်း ကြားနေရတယ်…ကျုပ်ပဲ ကီး နိမ့် နိမ့်သွားတာဘဲ ဖြစ်မှာပါလေ…….
တိရိစ္ဆာန် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့ (ရဲအရေးပိုင်တဲ့ အမှုအနေနဲ့)
ဇီးကွက်ကို ဘောလုံးလိုကန်မိတာနဲ့ အရေးယူခံရသေးတာပဲ
စက်ဘီး ၀ါးလုံးတန်းလေးမှာ ဇောက်ထိုးဆွဲသယ်တာတွေ လိုက်ပြီးအရေးယူမယ်ဆို
အခုလို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ လုပ်နေတာကို အရေးယူမယ်ဆိုရင်
ဘုမသိဘမသိကောင်က နှိပ်စက်နေပါတယ်ဆိုပြီး အသံတွေထွက်လာအုံးမယ်ထင်ပါတယ်။
အခုမြန်မာပြည်ဥပဒေ က မြည်းတစ်ကောင်နဲ့သားအဖနှစ်ယောက်ဇာတ်လမ်းခင်းနေတယ်လို့မြင်ပါတယ်။
မြည်းတစ်ကောင်နဲ့သားအဖနှစ်ယောက်ဇာတ်လမ်းခင်းနေတယ် ဆိုတာ ဟုတ်ရဲ့လား ကိုပေါက်ရဲ့…။ မနှုတ်လောက်လို့ တစ်ဆယ်ချေးနေတာ မဟုတ်ဘူးလား….။ ရိုက်စရာတွေ့တိုင်းသာ ရိုက်ထည့်လိုက်ရရင်လည်း ” သုမနကျောမှာ ဒဏ်ရာတွေချည့် ” ဖြစ်ကုန်တော့မယ်………..။ ဟင်းဟင်းးး
သတ္တဝါတခု ကံတခု လို့ပဲသတ်မှတ်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းသွားမှာပါ ..
ဖြစ်ဖို့ရှိလာလို့ ဖြစ်တယ် .. ပျက်ဖို့ရှိလာရင်လဲ ပျက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်…။
ကျွန်တော် လည်း အဲဒါကို ထောက်ခံပါတယ်ဗျာ။
မူဆလင်တွေ ပိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။
သူတို့တွေ ကြက်တွေကို လည်လှီးတာ က လည်ပင်းမှာ ရှိတဲ့ သွေးပျံ့ကြောကြီးကို
လှီးတာတဲ့။ အဲဒီသွေးပျံ့ကြောကြီး ပြတ်သွားရင် ကြက်ဟာ နာကျင်မှုကို မခံစားရတော့ဘူးတဲ့။
ခင်ဗျားတို့ လူမျိုးတွေကတော့တဲ့ ကြက်ကို မသေခင် ဒုတ်နဲ့ရိုက်၊ မသေမရှင်မှာပဲ
ရေနွေးအိုးထဲ ပစ်ထည့် နဲ့ ရက်စက်ကြတာကို တော့ ဘယ်သူမှ မပြောကြဘူးတဲ့။
ပုဇွန်တောင် ကြက်ဘဲဈေးမှာ သွားကြည့်ရင် မြင်နိုင်ပါတယ်တဲ့။
အခု အန်ကယ်ကြီး ရိုက်ပြတဲ့ ဓါတ်ပုံထဲမှာလိုပဲ ဆိုက်ကားပေါ်မှာ တွဲလောင်းဆွဲထားခံရတဲ့
ကြက်တွေဟာ ခေါင်းနဲ့ လမ်းမတစ်လျှောက် ပွတ်တိုက်ပြီး ပါသွားတာတွေ
အန်ကယ်ကြီးပြောသလို ပဲ ကျွန်တော်တို့ သူတို့ အသားကိုလည်းစားကြတယ်။
သူတို့ကို မသေခင် နှိတ်စက်သလိုတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူးလို့ ထောက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ။
သဘာဝ ( ကံ ) ကိုက သူများစားဘို့ဘဝဖြစ်လာတာ
ပြောရဦးမယ် ( ငခြောက်လေသံဖြင့် )
အချို့အသားစား ကြက်မွေးတဲ့သူတွေဆိုတာ နယ်ဖက်မှာပါ
ကြက်တွေကို သီတင်းကျွတ် ကထိန်ခင်းလတွေနဲ့ တွက်ချက်ပြီးမွေးကြတယ်
ကထိန်ခင်းလ ရောက်တဲ့အခါ အလှူအတန်းတွေတွက် ကွက်တိပါဘဲ
ဟုတ်ပါ့ ဆြာချစ်ရေ… ဒါကိုပဲ သူများသတ်ပြီးသား စားတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိမ်နေကြတယ်။ ပြောတဲ့ဘုန်းကြီးလည်း ဆွမ်းငတ်တာပဲ။ မနေနိုင် စားကြပေါ့ဗျာ၊ သို့သော် လိုရာဆွဲတော့ မပြောကြေး။ နို့မို့ရင် သဂျီးတို့လို မိစ္ဆာဝါဒီများ ဝါဒဖြန့်ဖို့ အကွက်ကောင်းရတယ်။ အခုဟာက ဘာနဲ့တူနေသလဲဆိုတော့ ရေအမှတ်နဲ့သောက်တာပဲ၊ မူးတာတော့ မတတ်နိုင်ဆိုတဲ့ အရက်သမားစကားနဲ့ သွားတူနေတယ်။ လူရယ်ဖြစ်လာမှတော့ အကုသိုလ်နဲ့ မကင်းနိုင်ဆိုရင် ကုသိုလ်တရားကိုလည်း မမေ့ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ရိုးသား ကြိုးစားကြပါဗျာ။ သဂျီးလို အကုသိုလ်နွံထဲ နစ်မြှုပ်မနေစေနဲ့။ အနည်းဆုံးတော့ အတ္တ၊ ပရ သူ့ဖက်ကိုယ့်ဖက် မြင်တတ်ပါစေ။။။
မေတ္တာဓာတ် စေတလုံးပိုင်ရှင် ကြောင်ကြီး
အင်္ဂလိပ်တွေ လုပ်ပေးသွားလို့ မြန်မာပြည်မှာ ဥပဒေ အတော်များများ ရှိပြီးသားပါ။ လက်တွေ့ မကျင့်သုံးနိုင်ကြလို့သာ ဥပဒေမဲ့သလို ဖြစ်နေတာ။ မသုံးတာကြာတော့လည်း မရှိတော့ဘူးပေါ့။ ဥပဒေအသစ် ချမှတ်လိုသူများ ရှိပြီးသားများကို ပြန်လည်လေ့လာပြီး ဘာကြောင့် မအောင်မြင်ရသလဲ မလိုက်နာကြသလဲ အရေးမယူနိုင်ရသလဲ ဆန်းစစ်ဖို့ အပူတပြင်းလိုအပ်နေပြီ။ အစိုးရတင်မက ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများလည်း အပြောနဲ့အလုပ် တထပ်ထဲကြဖို့ လိုအပ်တယ်။ သူတို့က မြင့်မြတ်တဲ့နေရာယူထားလို့ ပိုပြီး စည်းကမ်းကျန သေဝပ်ရမယ်။ မွတ်စလင်တွေ လည်လှီးသတ်တာ အညှင်သာဆုံးဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ လည်ပင်းက သွေးပြန်ကြော ပြတ်သွားရင် အမြန်ဆုံး သေမှာကိုး။ မသတ်ခင် စနစ်တကျ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ထားဖို့တော့လိုတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ အတော်အားနဲတယ်။ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်၊ တာမွေဖက်က ဗလီတွေမှာ ဒန်ပေါက်ဆိုင်တွေအတွက် သတ်ဖို့ထားတဲ့ ကြက်ခြင်းတွေထဲ ကြက်တွေ မဆံ့မပြဲထားတာ တွေ့ဖူးတယ်။ အသိတယောက်ပြောတာ မွတ်စလင် သားသတ်သမားတယောက်ရဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ခလေးတယောက် သားသတ်ရုံမှာ ငုတ်တိုင်နှစ်ဖက်နှာ ခေါင်းညှပ်ချည်ထားတဲ့ သတ်တော့မဲ့နွားလည်ပင်းကို ဒါးနဲ့ထိုး လက်တဲ့စမ်းနေတာ မြင်ဖူးတယ်တဲ့။ အရွယ်မရောက်သေးသူတွေကို သားသတ်ရုံမှာ မထားသင့်ဘူး။။။။ ပြောရရင်တော့ အများကြီးပဲ။ မြန်မာပြည်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာကို တိုးရစ်လုပ်ငန်း ဆွဲဆောင်မှုတခုအဖြစ် ပြချင်ရင် စေတီ၊ပုထိုးများ ထုံးသုတ် ရွှေသင်္ကန်း ကပ်ပြရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီး စည်းကမ်းတကျဖြစ်နေမှ ပေးချင်တဲ့ သတင်းစကား အောင်မြင်မယ်။။။။။
အန်ကယ်ကြီး စာ ကို ဖတ်အပြီးမှ ဘဲ
မသေခင် ကြောက်လန့် အောင် လုပ်ရင် သွေးထဲမှာ အဆိပ်တစ်မျိုး ထွက်လာတယ် ဆိုတာ ကို သိရပါတယ် ခင်ဗျာ ။ လေးစားကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
အဲဒီပုံက.. ဒီထက်ပိုပြီး..Image resolution ကောင်းမယ်ဆိုရင် ကျုပ်ဆီ ပို့ပေးပါလားခင်ဗျ..
ကြက်တွေ ခြင်းထဲ ထည့်တာထက် ဇောက်ထိုးချည်တာ အကောင်ရေ ပိုများများ ပါလို့လား မသိဘူး။
ရန်ကုန်မှာတော့ စက်ဘီးဆိုင်ကယ် အဲလို ချည်သွားတာ မတွေ့ရပေမဲ့ တခါတလေ လေးဘီးလေးတွေပေါ်မှာ ကြက်တွေ ပိညပ်နေအောင် သယ်သွားတာ.. နောက်ပြီး လေးဘီးရဲ့ ဘေးတန်းလက်ကိုင်တွေမှာ ဇောက်ထိုးချည်ထားတာမျိုး.. တွေ့မိတိုင်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိခဲ့ဘူးပါတယ်။
ကြက်ငှတ်တုတ်ကွေးဆိုပြီး သေချာလဲ မစစ်ပဲနဲ့ ကြက်တွေကို အရှင်လတ်လတ် မီးပုံရှို့တာက ရှိသေးတယ်…သူတို့ ဒုက္ခလဲ မသေးဘူးနော်.. အဲဒါပေါ့ အပါယ်ကျတယ်ဆိုတာ..လူတွေ ဒုက္ခရောက်မှာဆိုးတာနဲ့ အပါယ်ဘုံက သတ္တ၀ါတွေ အရှင်းခံရတယ်လေ..
ဆမ်ဆောင်း S8000 5.0 နဲ့ရိုက်ထားတာပါ
အန်ကယ်ကြီး က ၂၀၁၁ မေလလောက်ကဆိုတော့ နည်းနည်း ကြာနေပြီ ။
ရန်ကုန် အင်းစိန် လမ်းမပေါ် ဘူတာရုံလမ်း မှတ်တိုင်( မြို့ ထဲသွားတဲ့ဖက်) မှာ
လုံးဝကို ကြက်ခွဲတမ်း Live Show နေ့ တိုင်းရှိတယ်နော် ။
နေ့ လည် ၁၂ နာရီနဲ့၂ နာရီကြားမှာ ။
အတိအကျနေရာကတော့ ကုလားဘုရားကျောင်း အကျော် ဘူတာရုံလမ်း မှတ်တိုင် အကျော်
အများသုံး အစိုးရပိုင် တယ်လီဖုန်း အိမ် အရှေ့ တည့်တည့်မှာပဲ ။
ပဲခူး ထောက်ကြံ့ ဖက်က လာတဲ့ ဟိုင်းလက်စ် ပေါ်မှာ တကယ့် ကြက်တွေ ပိုးစိုးပက်စက် ။
ဒါက နေ့ ခင်းမှာ ။
ရန်ကုန် ပြည် လမ်းမကြီး ပေါ်က ပလက်ဖောင်း တလျှောက်မှာတော့ သေးပေါက်တဲ့ ကြက်တွေ
ဒါက ညပိုင်းမှာ ။